Proud Speech uye kubwinya kwaMwari — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Proud Speech uye kubwinya kwaMwari
Ndinoda vana. Chimwe zvikonzero ndinoda vana ndechekuti vanoratidza isu pachedu. Havachina kufanana zvishoma magirazi. Regai ndikuudzei zvandinoreva. Kids vane akanyatsorevesa vose zvakafanana matambudziko atinawo, asi matambudziko iwayo zvinongova zvakawanda pachena nokuti havazivi sei kuvanza navo asi. Izvi ndizvo chaizvo pachena apo vana vanoita zvinhu havasi kuita.
Makamboona mbudzana kubatwa chinhu havasi vakafunga kuti kubata? Vachada tarisa kuti aone kana uri kutsvaka. Havana hanya kana mumwe mbudzana akatarisa; ivo havadi vakuru kana vabereki kuona. Sei vanoitirei, Zvisinei? Nokuti vanoziva kuti uri muchengeti, uye havadi kuti uzive nokuti vanoziva kuti uri munhu vanofanira kupindura kuti.
Vakura Saizvozvowo. Kazhinji tiri OK nekuita zvinhu hatisi kuita, sokuvapo munhu tinofanira kupindura kuti haasi kuwana. Uri kufara makarindira kusvikira ukaona cops mberi. Pamwe tiri vakafara kusiya basa mangwanani chero Bhasi wedu haasi kuwana. Pamwe vamwe vedu vanobiridzira pabvunzo sokuvapo muzvinafundo kusingasviki isu. Hatidi kazhinji hanya kana vanhu vanoziva zvatiri kuita chinhu chakaipa, kana zviri simba tinofanira kupindura.
mu 1 Samuel 2, Hannah anonyengetera achipindura pakaberekwa mwanakomana wake Samuel. Uye mumunyengetero uyu, iye anonyevera vamwe varege kupara imwe chivi chaiyo, nekuti Mutongi wavo anocherechedza. Dzokerai neni 1 Samuel chitsauko 2, ndima 3.
Musaramba kutaura kudaro manyawi kana kurega muromo wako kutaura kuzvikudza kwakadaro, nokuti Jehovha ndiMwari unoziva, uye naye mabasa avanhu anoyerwa.
Murugwaro urwu, Hannah anotinyevera pamusoro nokuzvikudza nhaurwa, nokuti Mwari ruchawana uye Achazviita kuchititadzisa vazvidavirire nokuti. Ndizvo Ndinofunga pfungwa huru ndima iyi: Kana ukataura manyawi, uchava kupindura kuna Mwari nokuti.
Tinganzwa kufunga mashoko edu nokuzvikudza regai nyaya zvikuru. Asi kana uchifunga mashoko ako nokuzvikudza haana basa, Ndinotya nokuda kwenyu. Vanofanira kukushungurudza, nokuti vanokosha kuna Mwari, uye Iye Iye unofanira kupindura kuti. Hatidi pakupedzisira kupindura kuti vabereki vedu, kana shamwari dzedu, kana vafundisi vedu, asi kuna Mwari.
Uchifunga, Ndinoda kubvunza mibvunzo mishoma kunzwisisa rugwaro nani.
mubvunzo 1: Zvinorevei kutaura muchizvikudza?
Zvinoreva kushandisa mashoko enyu namanyawi.
Zvino kazhinji isu vaizofunga mashoko kuzvidzora achazvidzwa sezvo chete kungoti kuzvikudza pamusoro sei zvinoshamisa tiri, asi pane zvakawanda kutaura muchizvikudza. Uye ndinofunga imwe nzira kuti Hana ane mupfungwa ndizvo zvatinoona muchitsauko 1.
Hana aiva mukadzi ane murume ainzi Erikana. Akanga asiri mudzimai wake chete zvazvo. Akanga mudzimai mumwe ainzi Penina. Penina wakange ana vana, asi Hana akanga asingabereki. Penina dai ndezvaJosephus ashore Hana nezvazvo. Uye nekuda mbereko uye izvi kushora Hana akarwadziwa uye aisvimha misodzi.
Ndinofunga Penina muenzaniso nokuzvikudza kutaura Hannah anotinyevera pamusoro. Penina akanga asiri chete achitaura chokwadi kuti iye aiva nevana. Akanga asiri kungoedza kuyeuchidza Hana chokwadi. Akanga ruramisiro yake, vachizvirumbidza pamusoro paro, achirwadzisa naye.
Kuti wakarurama unorira ari utsinye. Sei kutaura muchizvikudza? Zvakanaka zvinoita sokuti Penina aishandisa ichi senzira panotaurwa akazvifukidza pamusoro Hannah. Zvinoita sokuti akanga kuzvitutumadza kuti zvimwe kubereka wake vana vakaita nani vake kupfuura Hannah, wakange asina chokwadi. Rugwaro rinonyatsotaura kuti vana zvipo zvinobva kuna Ishe. Penina akanga achitaura manyawi, uye aizofanira kupindura kuna Mwari nokuti.
Nzira We Taura manyawi
Tingave tichiziva kana kuti kwete, isu tose kutaura manyawi uye vanotaura nokuzvikudza nenzira dzakasiyana-siyana:
1. Imwe nzira pachena ari kuzvikudza tabudirira. Dzimwe nguva hatigoni kumirira kuudza vamwe pamusoro zvatinazvo uye nezvatatonzwa zvaitwa. Asi isu hatisi vachirumbidza Mwari nokuti; chinangwa kuchiita tiratidzike setiri nani. Handina kubatwa pachangu kuita izvi kakawanda. Pamwe kumhanyira kuva shamwari akwegura uye ivo vakati kwandiri chii Ndave kuita. Ndaigona kutaura rapping, asi ndingada kunongedzera mibayiro kana zvimwe kubudirira.
2. Kana sei nezvezvinhu tikati nezvevamwe? Dzimwe nguva isu nokuitira vamwe. Tinoda akapenda navo chiedza akaipa, saka tichatarisa zvakanaka. Pamwe kubasa isu vanoti imwe co-worker akanaka simbe, kuitira kuti vanhu vachange kucherechedza musiyano pakati pako vaviri. Kana zvichida pane kuva nenyasha nevamwe, tiri vaizviruramisa. Isu ikafanana mutongi pamusoro pavo, nokuti zvinoita kuti tinzwe zviri nani panyaya yedu yomudzimu isusu. Izvozvo nokuzvikudza matauriro.
3. Kana dzimwe nguva kunyange patinenge tichiti zvinhu zvakanaka. Pamwe zviri uchapupu pamusoro Sunday usiku. Zvinogona kuva inobaya mwoyo nyaya nezvebasa raMwari muupenyu kweshamwari, asi vavariro dzako chingava kubwinya kwenyu panzvimbo yaMwari. Kana kurega mumwe munhu azive wabatwa vachivanamatira. Kana kudzidzisa kirasi Sunday School. Kunyange zvinhu zvakanaka inogona kutaura vanozvikudza kana chinangwa chako chiri nokuzvirumbidza pachako.
Mienzaniso iyi zvakawanda pachena kupfuura vamwe. Saka unoziva sei kana? Chii anoparadzanisa anozvikudza kutaura kubva richiti chokwadi? Kutaura muchizvikudza ari kana usingakwani kubvuma Mwari sezvo Iye ari Mambo uye vakakodzera kukudzwa, mumwoyo mako kana mashoko pachavo. Uye kana tikadaro, isu tora kubwinya rinopiwa naMwari.
Mashoko ako anogona kubvuma Mwari, asi zvakadini nemwoyo? Vamwe vanhu vangasakodzera kuti kukwanisa mutsauko, asi Hana anotiyeuchidza kuti Jehovha ndiMwari unoziva. Uye kana tikashandisa mashoko edu kuti ugare pachedu, tinotofanira kupindura kwaAri payo.
Mundima Hannah inotiudza haana kutaura muchizvikudza, uye ipapo iye anotiudza nei: nekuti Jehovha ndiMwari unoziva uye anoyera mabasa.
mubvunzo 2: Nei Tichifanira Kupindura kuna Mwari nokuda Proud Speech?
Nokuti kudenhwa kubwinya kwake.
Kana chete mumwe wevaya okupedzisira maviri mashoko ichokwadi, izvozvo zvaizochinja chaizvo. Dai Mwari aiziva, asi akanga asiri mutongi, kana dai Mwari akanga mutongi asi havana kuziva. Asi zvakakwana Mutongi akarurama ndiyewo-achiziva zvose Mwari. Kwete chete Mwari ruchawana, Ari kuteerera. Mwari ndiye nguva dzose dzaigara munzvimbo dzose kukurukurirana kuitika. Anenge akafanana Ane isingaperi uwandu kuchengeteka makamera raizoiswa rutsoka ose mativi enyika. anoziva. Uye kana isu arwise kubwinya kwake nokutaura navanozvikudza, Achaziva.
Kana ndaiva kupinda kwako akaundi, mutore mari yoashandisa kuchikwama wangu, ndechokuti kuba? Aiwaka. Ndiri kutora chimwe chinhu chiri chomumwe iwe, uye kushandisa nayo pachangu. Ini handigoni ndingafadza chero mari yako pasina kutora kure. Uye zvakaipa nokuti ndezvenguva iwe.
Apo vanhu vanoedza kupa rukudzo pachavo, ivo angabira Mwari Wake. Haugoni ndivanaMesiya pachako rumbidzo uye kukudzwa, pasina kuba naMwari. Kudada kurwisa kwaMwari kubwinya. Sei? Nekuti kudada zvirume underestimation waMwari. Regai nditaure kuti zvakare: kudada zvirume underestimation waMwari. Uye sezvo tinoona 1 Samuel 1, underestimation uyu Mwari, uyewo kunotungamirira kuti underestimation vamwe. Saka kufunga zvakare zvikuru isu kunobva kufunga zvakare rakaderera Mwari, uye kuupenyu kufunga zvakare unozvininipisa vamwe.
Penina akanga akarasika. Iye kurerutswa pacharo nokuisa akazvisvibisa pachigaro Changamire choushe, sokunge Akazarura chizvaro chake pachake. Uye tiri kazhinji nemhosva chete. Tinofunga tiri vaya vanofanira kuwana mbiri kuti kukwidziridzwa, kana vaya vane tsika vana, kana mamiriro edu mari. Ehe, Mwari achakomborera basa redu nesimba, asi kuti hakurevi chinhu. KwaMwari ndiye chaiye kusarudza chinhu ose ezvinhu. Chinokosha pakupedzisira haasi simba redu, uchenjeri hwedu, kana kunyange Kutendeka kwedu.
Saka kuzvikudza ndiko kururama. Tose tine zvimwe kuzvikudza mumwoyo medu kuti tinofanira kurwisa. Paunofunga mumwoyo mako kuti vanokodzera kubwinya, kuti pachahwo chivi. Asi nokuzvikudza Kutaura achizvikoshesa mumwe pamwero. Sei isu, hwevanhu sezvo chivi venyama, kuva noushingi hwokubaya, kwete chete kufunga tiri vakakodzera Mwari akudzwe, asi kuti chaizvoizvo kupa izvozvo vamwe? Kuedza vamwe vagutsikane kupa rukudzo runobva kuna Mwari oga isu. Kutaura muchizvikudza kwakafanana kwete chete achibira munhu, asi kuudza munhu wose nezvazvo uye achivakurudzira kuti vaite zvakafanana.
Chete ndechokuti, Mwari haadi mavhidhiyo footage kuziva muri mhosva. Mwari zvausingafaniri vanhu vachiedza kumutorera kubwinya kwake uye kukurudzira vamwe kuti vaite zvimwechetezvo. Ndokusaka Hannah anoti tinofanira kuzviita.
Kutaura nokuzvikudza ari achida zvokurwa naMwari, chiri nei dzisingapindirani upenyu mutendi. Sezvo takanzwa ichi mangwanani, "Mwari anodzivisa vanozvikudza, asi anopa nyasha kuna vanozvininipisa. "
Kana tiri kwete Kristu, Mashoko edu vanozvikudza, achava chimwezve chikonzero Mwari acharanga isu. mabasa edu akaipa acharamba kubatsira serakaoma mhosva nesu. Kana iwe hausi muna Kristu, hapana chinhu chinotyisa pane Mutongi ane Kuziva zvose. Saka kana uri usiku huno pano uye musingazopandukiri Jesu, ndapota kuziva naye. Pazvivi zvenyu, uye kukanda pachako ngoni dzake. Aizvininipisa-vanozvininipisa chinopa zvakakwana kuti kufa kuitira kuti vatadzi vakaita semi neni uye unogona kurarama. Akamuka kubva muguva nesimba rose, uye anoshevedza varume kuMutevera. Taizorega kuda kutaura zvakawanda pamusoro kuti pashure.
Asi sezvo vaKristu, zvinorevei mabasa edu kuti kuyerwa? Mutendi wese mumupanda ichi vachava kupindura kuna Mwari zvose vanozvikudza shoko Vanotaura, asi mutongo wedu uchava akasiyana. Kristu akatotora zvedu pamuchinjikwa. Asi nyevero iyi kunofanira vachiri nechirongwa atinoita. Kana tichamira pamberi paMwari, mabasa wedu kana ndizopupurira chokwadi kuti takave vakavimba Kristu kana kuti takanga zvokusada kuvimba Kristu oga.
wo, tinoda kufadza Baba. Chokwadi anofara nesu muna Kristu, asi tinoda kuti kufadzwa nemabasa edu akanaka vanobuda nokutenda muna Kristu. Tinoda kufadza Mwari wedu ane rudo.
Hatifaniri kubvumira mashoko vanamanyawi kuuya kubva mumiromo yedu. Uye kunyange tichafanira kuzvidavirira kuna Mwari nokutaura kwedu vanozvikudza, tinofanira kurumbidza Mwari kuti zvivi zvedu zvakafukidzirwa muna Kristu.
Saka kana tichida Mwari kuti arumbidzwe nokutaura kwedu, sei isu kurwisa hurukuro iyi vanozvikudza?
mubvunzo 3: Tinogovana Sei Fight Proud Speech?
Tinodaro kupfurikidza mufaro Mwari.
Tinofanira kutarisa matauriro edu, asi izvozvo hazvina kukwana. Zvakafanana kutaurira mumwe munhu ane dzihwa mushonga anongotaurwa kubata hotsira yavo. Aihwa, chirwere ndizvo zvinofanira akarwisa.
Mwoyo unozvikudza richifarira pachayo. Asi mwoyo unozvininipisa unofara muna Mwari. Tarisa mashoko okutanga munyengetero waHana mundima 1: "Mwoyo wangu unofara muna Ishe." Hannah anotiratidza zvakakodzera Achipindura raShe chikomborero. Kwete muchifara chii wakapa Ishe, asi Mupi pachake. Zvatinoita aigona kudada, asi pachinzvimbo kunofanira kubereka kuzvininipisa matiri, nekuti tiri kugamuchira chipo chinobva kuna Mwari
Mwari anopa uye vanoribvisa. Mwari anovapavhurira uye Anorega. Asi iye anozviita zvose nokuda kwedu zvakanaka uye kubwinya kwake. Isu kuputsika kana tikatanga kuvimba nezvinhu zvakawanda. Ndichitamba Mwari anouraya zvose kudada uye tariro.
Unoita sei kufara Mwari? Kuita zvinodiwa kuzviyeuchidza ndiani shure zvose. Rumbidzai Mwari paunopiwa kuti cheki. Ndicho chikonzero nei isu Ndinovonga Mwari tisati zvokudya zvedu. Kuyeuka kuti kuzvikudza kuti tisafunge zvirongwa zvedu nguva dzose kuenda. Iti Ishe vachitendera. Ipa mbiri kuna Mwari kana vamwe kundomukwazisa iwe uri pezvaunoita. Rega kweminiti kubvumira mwoyo wako kutora chikwereti. Watch matauriro ako nokuzvikudza. Find midzi yokudada mumwoyo mako.
Mumwe nomumwe wedu kwakapiwa chinoshamisa mukana shoko rimwe nerimwe tinotaura. Tinowana kushandisa mashoko edu kuti vakudze Mwari akatisika. Tinowana kushandisa mashoko edu kubatsira vamwe kuona Mwari nokuti Ishe anokudzwa kuti ndiye.
Saka kurudziro yangu haisi kushandisa mashoko enyu namanyawi. pachinzvimbo, kuzvishandisa kuita rawakasikwa kuita-kupa mbiri kuna Mwari. Zvose ndezvenyu kwaAri zvakadaro.
aimsbaker • Gunyana 10, 2013 pa 1:39 pm • pindura
Izvi zvakanga zvakadaro anozorodza uye convicting. Ndotenda kwazvo! Ndine vamwe kudzidza kuita kuvaka zvandinodavira pamusoro uyu chokwadi.
faithchanda171 • Gunyana 10, 2013 pa 1:47 pm • pindura
vanodiwa ishe,ufare kwedu imi moga vanokodzera yose glory.help isu ishe kuti akufarireiwo nguva dzose uye kwete ichikubirai kubwinya kwenyu uye kuti zvose kuzvininipisa tisati. Mutiregererewo pakurwadziswa iwe uye vanhu patinotaura nokudada. Kufadza rubatsiro waaida zvikuru hana nezvinhu tikati…Amen
Godson • Gunyana 10, 2013 pa 1:52 pm • pindura
Musiki, hapana zviri mukuru kupfuura Muponesi mutambo-kuchinja / dhimoni-muurayi pasina chikonzero kuva mutambi
Christopher • Gunyana 10, 2013 pa 2:24 pm • pindura
Pamunhu okusuma akaipinza neni…ndicho chokwadi! Kubvira ndava nevana vangu pachangu ndinoona pachangu mavari zuva nezuva. Shoko rose imi Ndirwirwe vakaropafadza! Grace uye Peace!
Blessed • Gunyana 10, 2013 pa 3:16 pm • pindura
Naizvozvo zvinovaka! Ndatenda! Ndinoda ichi: “Kutaura muchizvikudza ari kana usingakwani kubvuma Mwari sezvo Iye ari Mambo uye vakakodzera kukudzwa, mumwoyo mako kana mashoko pachavo. Uye kana tikadaro, isu tora kubwinya rinopiwa naMwari” uye izvi:”Kana tichamira pamberi paMwari, mabasa wedu kana ndizopupurira chokwadi kuti takave vakavimba Kristu kana kuti takanga zvokusada kuvimba Kristu oga.”
QuincyStroman • Gunyana 10, 2013 pa 3:45 pm • pindura
Ishe akashandisa iwe neni Kurudzira pamwe SHOKO RAKE… An Thass Good News
eveno M. • Gunyana 10, 2013 pa 3:48 pm • pindura
Izvi kwaiva inoshamisa iverengwe. Kunyange kuzvininipisa kwedu, tinofanira kungwarira kuti hatisi kuita kuti vanhu vaone kuti isu vanozvininipisa, izvo pacharo nokuzvikudza.
Rinotsanangura nei vazivi vechiGiriki havana kutenda kuti kuzvininipisa raiva simba nokuti vakawanda anogona nyepera payo.
Jason • Gunyana 10, 2013 pa 5:29 pm • pindura
Handisi kureva kuti kukanda Trip pasi bhazi kana chero chinangwa kutanga gakava paIndaneti. Ini chete kukumbira kujekeserwa. Ini ndiri ichangobva payunivhesiti kutsvaga basa. Sei isu kutaura muchizvikudza yebasa apo tine zvimwe nzira wakasununguka pamusoro nokutsanangura nokubudirira zvakanaka zvinogona vashandirwi?
Trip Lee • Gunyana 11, 2013 pa 10:40 ndiri • pindura
Hausi ini nokukanda pasi bhazi BRO! Ndinofunga kuti mubvunzo mukuru. Sezvandataura pamusoro, Kutaura vanozvikudza kana kushandisa mashoko enyu namanyawi. Zviri kana ukaramba kubvuma Mwari saChangamire uye vakakodzera kubwinya.
Ngautidetsere pamabasa enyu uye vabvume munhu waizozviita basa rakanaka pasina achibira Mwari wokubwinya kwake (shure kwezvose, kuzvipira kwedu kwaari vanofanira kutitungamirira kushanda neunyanzvi). Haufaniri kutaura “kuna Mwari ngaave nokubwinya” pashure mutongo ose, asi iwe unofanira kuita zvose ane anozvininipisa mamiriro pakuziva Mwari sezvo mupi zvipo zvose zvakanaka. Pane musiyano mukuru pakati nokuzvininipisa nezvechimwe kugona kwako kana nokuzvikudza kuzvirumbidza. nomusoro?
Jesse • Gunyana 11, 2013 pa 1:13 pm • pindura
sei, vari mutsika kuti frowns pamusoro tsika dzechiKristu kuitwa akaratidza, isu ngatitii kuwana, uye vazvidavirire akatendeseka kubhadhara basa, pasina kuzvikudza kwedu kunyatsogutsikana vedu? Ndiri uyewo haana kuedza kukanda pasi bhazi uye kuwana zvikanganiso, asi somunhu kuyaruka anoda chaizvo kuti tirarame “unashamed mararamiro” uye kuparadzira vhangeri zvose zvavanoita, Ini vanodawo basa. Ndinofunga dambudziko haasi kukwanisa kuratidza kuzviranga yedu pagungano kumabasa pasina chokutya kudzingwa basa.
John • Gunyana 11, 2013 pa 8:58 ndiri • pindura
Kufanana akati, kutaura muchizvikudza haasi chete kutaura chokwadi. Chiri kutsvaka namanyawi panzvimbo Mwari. Unogona agutsikane munhu waizozviita basa rakanaka, pasina achibira Mwari wekubwinya yakamukodzera nokuda unyanzvi hwako uye basa rakaisvonaka
DaughterofGod • Gunyana 11, 2013 pa 1:27 pm • pindura
Ini ndiri kuva nguva nesimba mazwi aya: “Paunofunga mumwoyo mako kuti vanokodzera kubwinya, kuti pachahwo chivi.” Kana ndinoita chinhu zvakanaka, Ndinotsvaka bhabhadzira pamusoro musana, shoko rokukurudzira, kana zvimwe chiratidzo kuti basa rangu vagamuchira sezvo zvakaisvonaka. Tinorumbidza vatambi uye nemitambo zvikwata nesimba, uye nyika yose yedu unoshanda mibayiro uye platforms dzinokudza zvakaisvonaka. Saka sei ini chepakarepo 'urayai’ chido yangu iyi apo, chokwadi, Handiskuda? Ndinofunga chete nokuda, mumwoyo yedu, achibvuma kuti zvakaisvonaka redu uye basa ramaoko edu kunobva kwaAri, uye attributing accolades zvose zvatinowana kwaari.
Michael • Gunyana 11, 2013 pa 1:49 pm • pindura
Ndinoda kutora mukana uyu kuti kukutendai (Trip Lee) yokusairira Mwari vanoshandisa imi kuti mukudzei. Me uye mudzimai wangu here kunakidzwa nemimhanzi yako. rwiyo yedu kufarira chokwadi ndiko “Thing Good”. Ini verenga kuti imi vakarega kuita nziyo zvakare vatevere ushumiri hwako, izvi ndezvechokwadi? Tinoda zvakawanda rap semi BRO.
JB • Gunyana 11, 2013 pa 3:46 pm • pindura
Trip Ndinobvumirana dzakawanda zvose iwe anotaurwa Blog ichi maererano kukosha mashoko edu kunze mashoko iwe wakaita kuti “Mwari anopa uye anotora uye iye anovapavhurira uye Anorega”. Mwari ndiye 100% kugona! Hapana pamagiremu zvakaipa maari kuedza kuita kukuvadza kana kutora chimwe chinhu kubva kwatiri. Satani anoba (Zvinotora / Anorega), Anouraya, uye zvinoparadza. Isu vatendi (kana vasiri vatendi) kuzviitira isu kubudikidza nokusateerera (kana vasingazivi) zvokunamata mureza Mwari akatosarudza panyika. Mwari anovenga kuzvikudza zvikurukuru nokuti kunokonzera blockage kugamuchira zvizere nokunaka kwake zvikuru anoda kuva izvo zvinogona kupa Satani (uye mauto ake) kodzero yepamutemo kupinda uye racho yedu nokuzvikudza nzira. Izvi Usavenga kutaura kana kuedza kutaura pasi newe asi nhaurirano pachena izvo ndinotenda zvinobatsirei munhu Blog.
Trip Lee • Gunyana 12, 2013 pa 1:23 pm • pindura
Thanks kuverenga! Uye mashoko enyu anokurudzira. Ndinobvumirana newe kuti Mwari ndiye 100% kugona. Hapana mubvunzo pamusoro. Asi hazvirevi haana kubvisa. Zvakadini Job 1:21? Vamwe zvandakataura pamusoro aiva chaiyo mashoko kubva ndima. "Ndakabuda mudumbu raamai vangu, uye kupfeka ndichaenda hangu. Ishe vakapa uye Jehovha atora; Zita raJehovha ngarirumbidzwe. "
Saka Mwari anoita kubvisa, uye Iye achiri akanaka. The yakanaka chinhu, Mwari anoshandisa kunyange zvinhu zvakaipa kuti zvakanaka muupenyu vanhu vake. Romans 8:28 muenzaniso wakanaka weizvi. Ini kuti kunyora mumhanyi rose ichi saka handigoni kuita zvakawanda pachena. Thanks zvakare kuverenga!
RW • Gunyana 11, 2013 pa 8:35 pm • pindura
Sezvo Trip kutaurwa, Mwari anoziva zvose. Ungave vakudze Mwari zvinonzwika kana kutora chikwereti nokuda pezvaunoita zvinonzwika, Mwari vanoziva mwoyo wako achipa rumbidzo kuna. Achitaura kuti Mwari akudzwe zvinonzwika kunogona kuzvikudza kutaura kana mwoyo wako hauna zvechokwadi kupa rumbidzo kuna Mwari. Kana isu kuramba kutaura kubwinya kwaMwari kumativi vasingatendi, takafanana Penina uye vasingatendi vakaita Hannah. SevaKristu tiine katsika kunzwa pangozi kana tisingakwanisi kurumbidza Mwari pachena. Pakati vasingatendi isu vakafanana Penenniah mukomborere pachinzvimbo vana vomudzimu uye vanhu vasingatendi ndivo Hana dzakasara pasina zvikomborero saHana akanga asina vana. Chii tinonzwa kurumbidza Mwari, chaizvoizvo kuzvirumbidza makomborero edu. Tinofanira kuva vakagadzirira kupa rumbidzo kuna Mwari nguva dzose asi hatifaniri kukanganwa pamusoro yakarasika vanosarudza kuva naYe. Unogona kutora kuziva pezvaunoita uye kunyange kutora basa pasina kutora kukudzwa kure Mwari. Makagamuchira makomborero iwayo nokuti vakasarudza kufamba nzira Yake. Ipa mbiri Mwari mumwoyo yenyu, pfungwa, uye minyengetero. Mashoko enyu chete kuti, mashoko. Usamborega nhema kana. Kana kubvunzurudza vaifanira achikubvunza maita zvinhu rawakaita, kushandisa shoko kutenda. Kutenda sarudzo yenyu, nokuzvisarudzira kwako Mwari akasarudza kuti akuropafadzei, nokupa mbiri kuna mwari zvikomborero avo iye acharamba kudaro. On imwe chitsamba, kana uri kunetseka kuwana basa kuedza kusvika kuna Mwari kunyange zvakawanda.
Jonathan • Gunyana 11, 2013 pa 8:53 pm • pindura
Iri ndiro shoko zvechokwadi ndaifanira kunzwa. Ndinoona pachangu achitambura kuzviidza akarurama kunyange Facebook namagwatidziro vari nezvaMwari. Ndinofunga ndinofanira kutarisa zvakadzama kupinda vavariro yangu zvose zvandinoita. Hama dzangu nehanzvadzi munaKristu, kana y'all wakaramba, nyengeterera ini!
Megan • Gunyana 11, 2013 pa 10:27 pm • pindura
kuvonga zvikuru kukurukura mashoko ako. ndiri 14 uye mhuri yangu haasi kuenda kuchechi saka ini chaizvoizvo ichi nezvimwe vechiKristu zvinhu uye nhumbi kuti andibatsire akasabvumirana panze chii chii nezvokutenda kana kuti zvinoita chero musoro saka ndinokutendai kugoverana ayo chaizvoizvo anobatsira uye anokurudzira.
JB • Gunyana 12, 2013 pa 3:35 pm • pindura
Kuchera kuti Trip. Kukosha Feedback BRO asi zvinosuruvarisa tinotofanira kubvumirana kuti havabvumirani iyeyu. Lol.. Pane ndima Jobho rinotaura “Mwari anopa uye vanoribvisa” asi zvakanga mashoko Jobho haana Mwari. Jobho akanga akarurama uye vasina chavanopomerwa pamberi paJehovha asi akataura mashoko iwayo akasvika achibva asingazivi nemaonero sei wakaziva Mwari vakavhura nguva. Kuverenga kuburikidza vamwe Job (zvakananga zvitsauko 38-41) Mwari anotaura kuti Jobho sei vasingazivi akataura naye uye anomubvunza mibvunzo maererano zvekungofungira ake. In Job 42:3 (BSN) Jobho akapindura kuna Mwari uye akati: “You Akandibvunza, 'Ndiani Unofunga uri vasingabvumirani zvirongwa zvangu? Hamuzivi zvamuri kutaura.’ Ndakataura pamusoro pezvinhu handina zvachose kunzwisisa. Ndakataura pamusoro pezvinhu zvakanga kunondishamisa kuziva.” Zvadaro muna 6th ndima Jobho akati: “Saka ndinovenga pachangu. Ndine urombo zvechokwadi nokuda zvandakataura pamusoro pako. Ndicho chikonzero ndiri kugara muguruva nemadota.” Pashure akatendeuka kuti zvinhu apo vakatanga kufamba chaiko zvakanaka kwaari zvakare. Mwari aida kuona haana kutora ake ose nhumbi (aiva Satani) uye rakanga kutya Jobho akaratidza pakutanga ebhuku akabvumira Satani mukana kupinda hwake. Trip handidi kuita taridzai edu kukurukura pamusoro 'Comment chikamu’ saka kana ukaona zvakakodzera chete nehofisi e wangu Achipindura. Ndinoyemura tarenda renyu uye mwoyo wako kushumira Mwari munhu. gare gare
mari • Kurume 28, 2017 pa 4:13 ndiri • pindura
Quality nyaya kana wongororo Chakavanzika kuva chinangwa nokuda
vanhu kubhadhara kushanya padandemutande peji yacho, ndizvo ichi site ari kupa.
chirongwa • Mbudzi 23, 2017 pa 3:14 ndiri • pindura
Y օ a zvakadai intereѕting! І havafungi Ndakaverenga zvechokwadi sometһing zvakadaro pamberi.
S օ zvakanaka kuwana munhu ane zvishoma thougһts zvechokwadi pamusoro thіѕ nyaya.
Rеalⅼy.. ndinokutendai kutanga izvi. ѕite Ichi chinhu kuti kunodiwa padandemutande, mumwe ѕome оriginality!